Ny sarinao sy ny horonan-tsary rehetra ao amin'ny Google Photos miaraka amin'ny habaka tsy voafetra | Androidsis
Google I / O dia ny ny fiaramanidina ho an'ny zava-baovao marobetoy ny fampiharana Google Photos izay misy manomboka anio ao amin'ny Play Store.
Ity fahazoana ity dia miaraka amin'ny vaovao mahafinaritra ary ny fitehirizana sary tsy voafetra (hatramin'ny 16MP) sy horonan-tsary (1080p) maimaim-poana. Eny, manomboka anio dia mety ho reraky ny mampakatra ny sary sy horonan-tsary rehetra tadiavinao ao amin'ny Google Photos ianao, izay tonga ho fampiharana tsy miankina tanteraka tamin'ny naha-izy azy hatramin'ny nampidirana azy tao amin'ny Google+.
Ny sarinao sy ny horonan-tsarinao rehetra tsy misy fetra fitahirizana
Nandany minitra vitsy i Google hampahafantatra antsika ilay fampiharana Google Photos vaovao izay misy vaovao mahaliana maro toa ny ny fahaizana mandeha ho azy anananao hanasokajiana sary araky ny tarehy na zavatra. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika manadino ny famoronana lahatahiry sy fanasokajiana sary ary hifantohana amin'ny maha-zava-dehibe ny fakana sary mba hikarakarana ny fandefasana azy ireo ny Google Photos algorithm.
Efa niresaka ela be izahay momba izay hoentin'i Google Photos miaraka aminy sy ao anatiny Ny hetsika Google developer dia tsy nandiso fanantenana anay velively, mba hanambarana ny fitehirizana tsy manam-petra izay hananan'ny mpampiasa androany raha toa ka tonga any amin'ny Play Store ny fampiharana.
Ary raha efa manana fitehirizana tsy manam-petra sy algorithm izay mamantatra ireo singa ao amin'ny sary isika, Google Photos dia hampiseho ny tsara indrindra amin'ny Material Design mampindrana ny tenany ho iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra amin'ny lafiny famolavolana. Ireo sarimiaina ireo dia hikarakara ny fanolorana traikefa mpampiasa tena tsara miaraka amina interface izay hiasa toy ny hatsarana.
Afaka miditra amin'ny Ity rohy ity en ny fotoana hanombohana ny fametrahana izay afaka minitra na ora. Zava-baovao mahafinaritra avy amin'i Google izay maniry ny ho tonga trano ho an'ny sarinao rehetra manomboka anio i Google.
[Nohavaozina] Vita izany misintona azo alaina ao amin'ny Play Store. Azonao atao ny miditra amin'ny fisintomana APK avy amin'ny Ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » [APK] Google Photos misy anio miaraka amin'ny fitehirizana tsy voafetra maimaimpoana
Ie! Azo alaina amin'ny Play Store izao. Fampidirana nohavaozina
Google dia hitondra fidirana feno amin'ireo sarintany ivelan'ny Internet amin'ny Google Maps amin'ny faran'ny taona